WhatsApp को लागी सबै भन्दा राम्रो नाम Androidsis
आरोन रिवास | | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, WhatsApp
व्हाट्सएप विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग अनुप्रयोग हो, र यो नै ठिकै कारण यो हो कि साथीहरू, परिचितहरू, विद्यार्थीहरू, सहकर्मीहरू, कामदारहरू र परिवार बीच सामूहिक च्याटहरू सिर्जना गर्नका लागि यो संचारको प्राथमिक माध्यम हो। व्हाट्सएपमा सिर्जना गरिएको कुनै समूहको मनसाय वा उद्देश्य जेसुकै होस्, यसको लागि नाम पाउनु सँधै राम्रो हुन्छ जुन केहि रमाईलो, रमाईलो, मूल, हास्यपूर्ण, विचित्र र / वा रचनात्मक हो।
यस खण्डमा हामीले सूचीबद्ध गरेका छौं सयौं नाम जुन तपाईं व्हाट्सएपमा समूहहरू बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको समूहको लागि तपाईलाई मन पर्ने नै छनौट गर्नुहोस् र केहि समयका लागि आफ्ना साथीहरूसँग हाँस्नुहोस्।
तपाइँले तल फेला पार्नुहुने वाट्सएट समूहका लागि सबै नामहरू यस रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा राम्रोसँग, तिनीहरूलाई विचारको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको मनपर्ने अनुसार परिमार्जन गर्नुहोस् जुन तपाईंले सिर्जना गर्नुहुने समूहको विषयवस्तुसँग मेल खान्छ। एउटै समयमा, तपाइँ इमोजिस (भावनात्मकहरू) थप्न सक्नुहुन्छ जस्तै अनुहारहरू, अभिव्यक्तिहरू, आंकडा र तपाइँको समुहको लागि सोच्न सक्ने सबै।
1 व्हाट्सएपमा केटा समूहका लागि नामहरू
2 व्हाट्सएपको लागि केटी समूह नामहरू
3 व्हाट्सएप को लागी परिवार समूह नाम
4 कार्यकर्ता र सहकर्मीहरूको लागि व्हाट्सएप समूह नामहरू
5 खेल टोलीहरूको लागि व्हाट्सएप समूहहरू
6 वयस्कहरूको लागि व्हाट्सएप समूह नामहरू
7 जिमका लागि व्हाट्सएप समूह नामहरू
8 एक व्हाट्सएप समूह कसरी बनाउने
व्हाट्सएपमा केटा समूहका लागि नामहरू
यदि तपाईं साथीहरूसँग व्हाट्सएप समूहमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई निम्न मध्ये एक वा बढी मनपर्न सक्छ जुन हामी तल संकलन गर्दछौं। जस्तो कि हामीलाई थाहा छ कि केटा समूहहरू सबैभन्दा रमाइलो हुन् र कम्पसको साथ हाँस्न प्रयोग गर्थे, तपाईं रमाईलो र रमाईलो देखि गम्भीर र मजाकपूर्ण लागि एक छनौट चयन पाउनुहुनेछ।
क्रीम र क्रीम
एभेन्जरहरू (वा एभेन्जरहरू)
नियन्त्रण बिना विषयहरू।
साथी छनौट द्वारा, दायित्व द्वारा होईन।
आफैलाई अनादर गर्नुहोस्। '
जो सधैं पालन गर्दछन्।
महिला अघि साथीहरू।
बरफ कसले ल्याउँछ?
मेम्स, बियर र पार्टीहरू।
धेरै मूर्ख मूर्ख।
सबैका लागि एक र सबैको लागि सबै।
राम्रो कालो हास्य।
मूर्ख, तर गध होइन।
पैसा बिना, तर tumbao संग '।
नर कपाल छाती
ती जो सधैँ ट्र्याकमा नियन्त्रण गर्दछन्।
जीवनका लागि नराम्रो केटाहरू।
कसैलाई विश्वास नगरी।
बुद्धिले हामीलाई पीछा गर्दछ, तर हामी छिटो हुन्छौं।
संयोजन कहिल्यै विफल हुँदैन।
कुनै व्यापार र गर्न केहि राम्रो छैन।
कुरूप, तर रमाईलो।
कार, ​​मोटरसाइकल र पार्टीहरू।
जो कुनै भावनाहरु छन्।
अर्को आमाबाट भाइहरू।
पहिले पार्टी, त्यसपछि पार्टी र अन्तमा पार्टी।
युनाइटेड हामी राम्रो छौं।
हामी सँगै हिड्छौं, हामी सँगै मरेका छौं।
जो गर्न सक्छन् किनभने तिनीहरू चाहन्छन्।
हरेक मानिस आफ्नै लागि।
छिमेकमा नराम्रो केटा।
हाम्रो बिरूद्ध संसार।
नियमहरू भ be्ग गर्ने छन्।
तपाईंलाई समूहबाट हटाइएको छ।
जो कमसेकम पियक्कड हुन्छन्।
राम्रो जीवन को प्रेमीहरु।
पछाडि सानो समूह।
यति ठिक, ताजा।
जहाँ केही पनि सबै कुरा हुँदैन।
सबैभन्दा प्रवाह संग आलु।
पक्ष तिर हेराई नगरी।
जन्ममा अलग गरिएको।
एक प्रेमिका संग आउन निषेध
जो सँधै एक अर्कालाई सहयोग गर्दछन्।
मेम्स, मेम्स र अधिक मेम्सहरू।
खेल अघि गम्भीरता ... वा यो अन्य तरिकाको वरिपरि हो।
जो यसलाई सबैभन्दा भ break्ग गर्छन्।
दाज्यू-भाइहरू भन्दा हामी दिदीहरू हौं।
आराम बिना कामदारहरू।
कुनै कारण बिना विद्रोही।
व्हाट्सएपको लागि केटी समूह नामहरू
केटीहरू अधिक सूक्ष्म हुन्छन् र आफ्ना साथीहरूसँग बढी बढी जोडिन सक्दछन्, सामान्यतया। तिनीहरू एक अर्कालाई सबैभन्दा मायालु पनि हुन्छन्, तर यस कारणले गर्दा तिनीहरू बोरि ;्ग छैनन्; एकदम उल्टो तसर्थ, तल हामीले केटी समूहहरूको लागि धेरै नामहरू सूचीबद्ध गरेका छौं जुन तपाईं तपाईंको व्हाट्सएप समूहमा थप्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरू सँधै एकजुट हुन्छन्।
राजकुमार बिना राजकुमारी।
अनौंठो र अपूरणीय।
लिलामीको बारेमा पागल।
पावरपफ केटीहरू वा सुपर बेबहरू।
गफ हाम्रो प्याशन हो।
पहिले तपाईं त्यो सरल देखाउँनुहुन्छ।
100 मा शुद्ध ग्लैमर।
हामी कसलाई मार्छौं?
शहर / शहर को रमबरास।
नक्शा (सधैं उत्तम साथी)
युनाइटेड हामी धेरै सुन्दर छौं।
सँगै एक कारणको लागि, जीवन द्वारा अलग।
उज्ज्वल मेकअप संग एक।
यहाँ के हुन्छ यहाँ रहन्छ।
प्रेमीको साथ आउन निषेध गरिएको।
व्हाट्सएप को लागी परिवार समूह नाम
परिवार सामान्यतया नजिक र धेरै मायालु हुन्छ। जे होस्, चुपचाप र कुराकानीहरू जुन मित्रहरू बीचको जस्तो देखिन्छ कहिल्यै चोट पुर्‍याउँदैन, र बोचनचेरा बुआसँग कम। त्यसकारण हामीले धेरै रमाईलो र पागल नामहरू छान्नुभयो जुन तपाईं व्हाट्सएपमा परिवार समूहको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ अरूहरू पनि छन् जुन तपाईंलाई मनपर्न सक्छ।
परिवार दायित्व बाहिर।
परिवार पहिले, त्यसपछि साथीहरू।
वासनाका रातहरूको परिणाम।
आमाहरू र तिनीहरूका आशिष् लडिरहेको।
जहाँ तपाईलाई अनुमति माग्नु पर्छ।
घर प्यारो घर।
म यी मानिसहरूलाई चिन्दिन।
शुद्ध पागल र कुनै सामान्य छैन।
के हुन्छ जब तपाईं सुरक्षा प्रयोग गर्नुहुन्न।
जीवन र रगत।
कार्यकर्ता र सहकर्मीहरूको लागि व्हाट्सएप समूह नामहरू
कार्यालय र वास्तवमा कुनै पनि काम वातावरण मा यो सहयोगी र सहकर्मीहरु संग राम्रो संचार हुनु र कायम गर्न सधैं महत्त्वपूर्ण छ। कार्य समूहहरू सिर्जना गर्नका लागि व्हाट्सएप एक मुख्य अनुप्रयोग हो र, यस कारणको लागि, तलका केहि नामहरू कम्पनीको कार्य समूहका लागि उत्तम हुन सक्छ। धेरै हास्यास्पद र हास्यपूर्ण छन्, अरू त्यति धेरै छैनन्।
एक परिवार भन्दा एक परिवार।
कडा मिहिनेत गर्दै वा काममा टिकाऊ?
धन्यवाद शुक्रबार हो!
जो तनावग्रस्त हुन्छन्।
काम जारी राख्न।
तनाव बिना त्यहाँ कुनै राम्रो परिणाम छैन।
कम्पनी मेरो दोस्रो घर हो।
आज यो बाहिर आयो।
कफी लामो बाँच्नुहोस्!
मलाई सोमबार मन पर्दैन।
यहाँ मालिक आउँछ।
खेल टोलीहरूको लागि व्हाट्सएप समूहहरू
यो सामान्य छ कि खेल टोलीहरूमा, चाहे ती खेलहरू हुन् जस्तै फुटबल, बेसबल, बास्केटबल र अन्य कुनै पनि, त्यहाँ धेरै मिलन हुन्छ र हाँसोको कहिल्यै अभाव हुँदैन, त्यसैले किन तिनीहरू सर्वश्रेष्ठ मैत्री सर्कलहरू बन्न सक्छन्। कुनै घटना नभएको बेला सम्पर्कमा रहनको लागि, निम्न नामहरू सहित हामी तल सूचीकृत एक व्हाट्सएप समूह हुनु राम्रो हो:
खेल जीवन हो।
लामो प्रत्यक्ष फुटबल।
हामी यसलाई बनाउँछौं।
त्यो प्रतियोगिता हाम्रो हुनेछ।
Musketeers भन्दा बढी एकजुट।
जहिले पनि विजयको लागि।
बेसबल मेरो उत्कटता हो।
जसले एक कमाउँदैनन्।
युद्ध हराउनु भनेको युद्धलाई हराउनु हो।
वयस्कहरूको लागि व्हाट्सएप समूह नामहरू
यदि तपाईंसँग वयस्क साथीहरूको समूह छ भने, कुराकानीका विषयहरू धेरै फरक हुन सक्छन् र कहिलेकाँही बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूको लागि केहि मिति बाहिरको हुन्छ। त्यसकारण व्हाट्सएपमा वयस्कहरूको समूहका लागि नामहरू केही सुझावमूलक, तर हास्यास्पद वा गम्भीर पनि हुन सक्छन्।
केवल ठट्टा गर्दै, तर यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने यो ठट्टा गर्दै हुनुहुन्न।
एउटा बियर र घर जानुहोस्।
यहाँ केहि जान्छ।
बिरस र राम्रो जीवन।
सप्ताहन्त व्यवहार गर्दछ।
अन्तिम र हामी छोड्छौं।
यहाँ के भइरहेको छ भनेर कसैलाई पत्ता लगाउन नदिनुहोस्।
गम्भीर, तर तीतो छैन।
तपाईँ एक चोटि मात्र बाँच्नुहुन्छ।
घर भित्र बच्चाहरू।
तिनीहरूको अनादर गर्नुहोस्। '
जिमका लागि व्हाट्सएप समूह नामहरू
त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन आकार र धेरै राम्रो शारीरिक स्वास्थ्यमा रहन चाहन्छन्। केहि वजन कम गर्न यो गर्न चाहानुहुन्छ, जबकि अरूहरू विपरित चाहिन्छ। त्यहाँ तिनीहरू पनि छन् जो केवल मांसपेशिहरू निर्माण गर्न चाहान्छन् वा महिलाको अवस्थामा उनीहरूको शरीरलाई कामुक फिगर दिन्छन्।
उद्देश्य जेसुकै होस्, यदि तपाईं व्यक्तिहरूको समूहसँग जानुभयो भने, एक व्हाट्सएप समूहले चोट पुर्‍याउँदैन, र जिममा जाने प्रशिक्षणको लागि समर्पित कम वा कुनै खेलकुद अभ्यास गर्न कुनै स्टेडियममा समर्पित। त्यसकारण तपाईंले तलका नामहरूमा एक नजर राख्नु पर्छ।
कुनै दु: ख पनि छैन कुनै लाभ पनि छैन।
जिम वा केहि छैन।
विगतको ट्रोडन र मांसपेशिको साथ भविष्य।
शून्य फ्याट, पूर्ण प्रोटीन।
एक व्हाट्सएप समूह कसरी बनाउने
अन्तमा, यदि तपाईंलाई व्हाट्सएपमा समूह कसरी बनाउने भनेर थाहा छैन भने, हामी यहाँ तपाईंलाई दिन्छौं। केवल तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
व्हाट्सएप खोल्नुहोस् र तीन बिन्दुहरूको साथ आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् जुन ईन्टरफेसको माथिल्लो दाहिने कुनामा अवस्थित छ।
त्यसो भए एउटा विन्डो पाँच विकल्पहरू देखाउँदै प्रदर्शित हुनेछ; पहिलोमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन नयाँ समूह हो।
पछि, सबै सम्पर्कहरू चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं तपाईंको व्हाट्सएप समूहमा थप्न चाहानुहुन्छ।
समाप्त गर्नका लागि तपाईले चाहेको समूहको नाम लेख्नुहोस् र समूहको लागि प्रोफाइल फोटो अपलोड गर्नुहोस्, जुन तपाईको मनपर्ने छवि पनि हुन सक्दछ।
अन्तमा, हरियो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले तपाईको समूह बनाउनु हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » व्हाट्सएपका लागि सबै भन्दा राम्रो समूह नामहरू